फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् !
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सोमबार भएको भएको विमान दुर्घटना अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना हो । यसअघि टर्किस एयरको जहाज अवतरण क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भए पनि मानवीय क्षति भएको थिएन । टर्किस र विमान बंगला दुवै जहाज अवतरण क्रममा धावनमार्गभन्दा बाहिर गएर दुर्घटनामा परेका हुन् । चालक
राधा चौधरीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोक्सीको आरोपमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ की २० वर्षीया राधा चौधरीलाई कुटपिट गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीबाट छुटाइएको
नेपाली पत्रकारिताःहोचो कदको उच्च निष्ठा
सिद्धान्तः पत्रकारितालाई समाजको ऐना भनिन्छ । पत्रकारहरु समाजको आँखा र कानका रुपमा परिचित छन् । पत्रकार जो निरन्तर सूचना प्रवाहमा दत्तचित्त खटछन् । त्यसैले समाजमा उनीहरुको भूमिका अहम् छ । ९० वर्षे वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल आफ्नो समयमा उम्दा पत्रकार थिए । होचो कदका रिसालले ५ दशकको पत्रकारिता करियरमा ‘उच्च
बललिंदै नारीस्वर र भूमिका
काठमाडौँ । कुरा गरौं समाजका केही अपरिहार्य शक्ति नारी शक्तिको । आमाको काख, दिदी–बहिनीको स्नेह, श्रीमति अनि मायालुको माया, यी सबै नारीपात्र अनि यिनको प्रगाढ मायाको पछ्यौरी भित्र नै एउटा पुरुषको जीवनका अवयवहरू चलायमान हुन्छन्, आज तिनै नारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस्, मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय नारी
‘महिलाको आन्दोलन समाप्त भएको छैन्’
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महिला र पुरुषबीच समानता नभएसम्म देशको आर्थिक विकास नहुने बताएकी छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको १६ औंँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल संघीयतामा गइसकेको पनि महिलाको आन्दोलन समाप्त भइनसकेको उल्लेख गरिन् । आयोगका
चिट्ठा थुतेर घर !
सन्तोष अधिकारी, गोरखा २२, फागुन । सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, चिट्ठा थुतेको भरमा घर पाइन्छ भन्दा । तर, गोरखाको धार्चे गाउँपालिकमा नमूना लाप्राक बस्ती निर्माण कर्ता गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले भूकम्प पीडितलाई चिट्ठा थुतेर ब्लक बाँडफाँट गरेको छ । धार्चे–४ को गुप्सीपाखामा निर्माणाधीन घरहरु आइतबार
कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा कुश्मा कुश्मा चन्द को बिहे भयो । त्यतिबेला उनी १४ वर्षकी मात्रै थिइन् । बिवाहाको वर्षपछि छोरो जन्मियो, भैंसी गोठमा । छोरो जन्मिएको ६ महिना नपुग्दै घरेलु हिंसाको सिकार भएकी उनी घर र भैंसी गोठ दुवै ठाउँबाट विस्थापित भएपछि सुरु उनको भयो संघर्ष । बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्षको
मधुसूधन ओझा /कोरियामा प्रवासी मजदूरको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । हाल कोरियामा दश लाखभन्दा बढी मजदुरहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसमा इपियसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले स्वतन्त्र रूपमा कम्पनी सार्नमा निषेध गरी पेशा रोज्ने स्वतन्त्रताको माग गर्दै आएका छौं । सुरुमा कोरिया आउँदा
कञ्चनपुर। परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा कञ्चनपुरमा अझै छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । रजस्वला भएका महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने चलनले निरन्तता पाउँदै आएको छ । समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको ‘कु’ प्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन्
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सदनका पदाधिकारी चयन गरिने
काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनका पदाधिकारी चयन आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले आह्वान गरेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलको परामर्श बैठकले बुधबार दुबै सदनका पदाधिकारी चयनका लागि कार्यतालिका तयार पार्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । संसद् सचिवालय र संसद्मा
रङहरूको पर्व 'होली' धुमधामका साथ मनाइँदै
काठमाडौँ । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व बिहीबार हिमाली एवम् पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सदभावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ । केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो
७० प्रतिशत आवास पुनःनिर्माण भएको प्राधिकरणको दाबी
अमरवाणी संवाददाता /काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका प्रभावित १४ जिल्लामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीले निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियामा संलग्न भएको नयाँ तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अति प्रभावित १४ जिल्लामा एक लाख
काठमाडौं । होली पर्व नजिकिदै गर्दा देशभर प्रहरीले देशभर सुरक्षा व्यवस्थाा कडा बनाएको छ । होलीमा हुने अवाञ्छित गतिविधि र इच्छा विपरीतका कार्य रोक्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको हो । काठमाडौं लगायतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फागुपूर्णिमा अर्थात् होलीलाई लक्षित गर्दै इच्छा विपरीत लोला
जिद्दीले जन्मिएको एउटा कलाकार
फेसबुकमा दैनिक हजारौं पोष्ट हेरिन्छन् । कति पढिन्छन,कतिको वास्तै गरिदैँन् । आज यस्तो पोष्टको चर्चा गर्दैछु जुन मेरो यो आलेख तयारको मुख्य स्रोत बन्यो । उनले बनाउँदै गरेको मूर्ति र चित्रकलाको फोटो पोष्ट गरेका थिए । त्यसले कलाको महत्व त झल्कन्थ्यो नै त्यसमा उनको लगाव, संघर्ष र व्यवसायिक झुकाव पनि उत्तिकै
बसन्तपुरमा होलीको चीर ठड्याइयो,आजबाट होली शुरू
काठमाडौं । सामाजिक सद्भावको पर्व होली शुक्रवारबाट शुरू भएको छ । काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित बसन्तपुरमा होलीको चीर ठड्याइएपछि होली शुरू हुन्छ । शुक्रबार बिहान रंगीविरंगी कपडाहरूको ध्वजासहितको हुनमान ढोकामा तीन खण्डे चीर ठड्याइएको छ। हनुमानढोका दरबारको दक्षिण पटाङगिनी, ऐतिहासिक मोहनकाजी चोक
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर २०७४ माघ २९ गते , एउटा यस्तो कृषि बाली जसको मूल्य किलोको दुई हजार पाँच सय पर्न सक्छ । यसलाई खोल्साका सुन भन्छन् । बालीको नाम हो अलैंची । अलैंचीको पर्यायवाची नाम बनेको छ ‘खोल्साको सुन’ । अलैंची खेती गरेर मालामाल हुनेहरु पूर्वी नेपालमा हजारौं छन् । त्यति महंगो छ, अनि कृषक मालामाल हुने
काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रण गर्छु : वातावरणमन्त्री पण्डित
काठमाडौं । एमालेका नेता लालबाबु पण्डित विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेको समयमा गरेको कामका कारण उनी इमान्दार र स्वच्छ छवीका नेताको रूपमा परिचित छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लालबाबुलाई पहिलो रोजाइको मन्त्री बनाएपछि उनको थप चर्चा चुलिएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका पण्डितले
काठमाडौँ ४, फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालीको महान् पर्व ग्याल्बो ल्होसारका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण शेर्पा समुदायको सुख, शान्ति एवम् समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आज जारी गर्नुभएको सन्देशमा सिंगो नेपाली संस्कृतिभित्रको एक महत्वपूर्ण पर्वका
यस कारण मनाइन्छ 'भ्यालेन्टाइन डे'
काठमाडौं । हुन त माया गर्न कुनै दिन नै आउन पर्दैन । हरेक पलपलमा माया गर्न सकिन्छ । एक हप्तासम्म प्रेमको सप्ताह चल्यो । प्रेममा सबैकुरा आवश्यक हुन्छन् भन्ने प्रेम सप्ताहको मर्म हो । तर फेब्रुअरी १४ अर्थाथ् 'भ्यालेन्टाइन डे' भने आज हो । यसलाई नेपालीकरण गर्दा प्रणय दिवस भनिन्छ । यस दिनलाई विश्वरभरका
यस्तो छ महाशिवरात्रीको धार्मिक महत्व
काठमाडौँ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका रात स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शिवालयमा रातभर जाग्राम रहेर भगवान् शिवको स्तुति गर्दै महाशिवरात्री पर्व मनाइँदैछ । यसै दिन शिवलाई मनपर्ने बेलपत्र, पञ्चामृत, पञ्चगव्य र श्रीखण्ड अर्पण गरेर धुनी जगाई यो पर्व मनाइँदैछ । शिकारीले शिकार नपाएर बेलको रूख हल्लाउँदा बेलका पात
भूकम्प पीडितको पैसामा सरोकारवालाको रजाइँ
गोरखा । गोरखा जिल्ला त्यति धेरै पीछडिएको जिल्ला पनि होइन । राजधानीबाट नजिकै रहेको यो जिल्ला ऐतिहासिक महत्वको छ । विकासका पूर्वाधारहरूले पनि फड्को मारिसकेका छन् । सदरमुकाम गोरखा वजारमा सुविधासम्पन्न होटलहरू छन् । गोष्ठी, सेमिनार गर्न सभाहलको व्यवस्था छ । तर, अचम्म लाग्ने गरी गोरखा भूकम्पको समीक्षा
विदेशबाट फर्किएका युवाहरू सामाजिक सेवामा
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका युवाहरूको सक्रियतामा स्थापना भएको ‘सद्भाव युवा समाज’ ले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेर सामाजिक कार्यको थालनी गरेको छ । शनिबार उक्त समाजले राजधानीमा केन्द्रीय रक्तसंचार केन्द्रको सहयोगमा रक्तदान कार्य गरेर सामाजिक कार्यको थालनी गरेको हो । विशुद्ध
शिवरात्रीमा १२ लाख भक्तजन आउने
काठमाडौं २८, माघ । यस वर्ष शिवरात्रीमा १२ लाखभन्दा बढी भक्तजन सहभागी हुने अनुमान पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ । गतवर्षहरूको तुलनामा सहभागी वढ्ने भन्दै यो वर्ष उक्त संख्यामा भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि कोषले तयारी पूरा गरेको छ । शिवरात्रीका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने व्यवस्थालाई सहज र सुव्यवस्थित
साहित्यकार रमेश शुभेच्छु सम्मानित
काठमाडौं । स्याङ्जाका समाजसेवी, शिक्षासेवी पण्डित आनन्दमणि ढकाल तथा टुल्कीदेवी र नन्दकला ढकालको सम्झनामा स्थापित विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको प्रवचन कक्षमा शनिबार पण्डित आनन्दमणि–टुल्की–नन्दकला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार
समाजसेवी शाहद्वारा सहयोग
रोशन ज्ञवाली/ माघ २३ , बर्दिया । समाजसेवी हर्क शाहले बर्दिया राजापुरका अपांगलाई भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गरेका छन् । काठमाडौं बस्दै आएका शाहले अपाङ्ग ललितलाई ब्हील चियर र नगद दश हजार प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा अर्का समाजसेवी चिन्तामणि आचार्य (दीपेन्द्र)ले ४ लाख ५० हजार बराबरको जग्गाको लालापूर्जा
‘हिन्दु राजा’ लविङ गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
माघ २२, काठमाडौं । तीर्थ यात्रा र पारिवारिक भेटका नाममा पटक–पटक भारत भ्रमणमा गरिरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ‘हिन्दु राजा’ को पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । यसबारे औपचारिक ज्ञानकारी नगराएपनि सोमबारको भ्रमणबारे उनले हिन्दुत्वबारे आफूले खुलेर छलफल गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन्
कान्छा १३ वर्षको भयो, बाङगे १५ वर्षको भयो । दुवैले दिनमा ६ किलो राँगाको मासु खान्छन् । यी दुई बाघका पाँच जना मानिस साथी छन् । साथीहरुको नाम हो– हरिकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश भण्डारी, आलोक श्रेष्ठ, राजकुमार बस्नेत र समीर पाण्डे । सबैभन्दा मिल्ने साथी चाहिँ हरिकृष्ण श्रेष्ठ हुन् । हरिकृष्ण सदर चिडियाखाना जाउलाखेलका